संकटमा रुद्राक्ष व्यवसाय ! « Mechipost.com
संकटमा रुद्राक्ष व्यवसाय !
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०७७, बुधबार १५:२०
फिदिम । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण संखुवासभामा यो वर्ष रुद्राक्ष व्यवसाय संकटमा परेको छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रुद्राक्ष खरिद गर्ने व्यापारी चीनबाट आउन नसक्दा संखुवासभामा मात्रै फलेका २ अर्ब भन्दा बढीको रुद्राक्ष बिक्री नभएपछि यहाँका किसान मारमा परेका हुन । खाँदबारी ढुंगेधाराका इश्वर खत्रीको बगानमा गतबर्षको भन्दा धेरै रुद्राक्ष फलेका छन् ।
टिप्ने बेला भइसक्दा पनि ८० बोटमा लगाइएको रुद्राक्ष रुखमै छ । समय घर्कीसक्दा पनि खत्री जस्तै अरु किसानले पनि रुद्राक्ष झारेका छैनन् । बिशेषगरी, साउन र भदौमा टिपेर बिक्री भइसक्नुपर्ने रुद्राक्ष कोरोना महामारीले सिर्जित समस्याका कारण अहिलेसम्म रुखमै राख्नु परेको कृषक खत्री बताउनुहुन्छ ।
चीनबाट पनि रुद्राक्ष किन्ने व्यापारी अहिलेसम्म आएका छैनन् । सामन्यतया, सानामुख अर्थात ५ र ६ मुखे रुद्राक्ष चीन निर्यात हुने गरेको थियो । गत वर्ष रुद्राक्ष व्यापारबाट राम्रो आम्दानी गरेका व्यवसायी यो वर्ष भने करोडौंको लगानी डुब्ने हो की भन्ने चिन्तामा छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चिनियाँ व्यापारी आउने सम्भावना निकै कम छ । रुद्राक्ष खरिद गर्न गत वर्ष सय भन्दा बढी चिनियाँ व्यापारी संखुवासभा आएका थिए । त्यसबेला संखुवासभामा मात्रै झण्डै दुई अर्बभन्दा बढीको रुद्राक्षको कारोबार भएको रुद्राक्ष ब्यवसायी संघ संखुवासभाका अध्यक्ष चक्र बिसुंखे बताउनुहुन्छ ।
धेरै परिश्रम, गोडमेल र मलजल गर्नु नपर्ने तथा बजार मुल्य पनि राम्रै पाउने भएपछि खेतीयोग्य जमिन मासेर रुद्राक्ष खेती लगाएका कृषक अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् ।